स्व. संजोग स्मृति कप शुरु, बिन्दावासिनीको विजयी शुरुवात – Khel Dainik
स्व. संजोग स्मृति कप शुरु, बिन्दावासिनीको विजयी शुरुवात
बेलबारी (खेलदैनिक) । टुबोर्ग स्व. संजोग स्मृति कप नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा बिन्दावासिनी फुटबल क्लब, बिराटनगरले जित हात पार्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
उद्घाटन खेलमै बाई पाएको बिन्दावासिनीले डाँगिहाट फुटबल क्लब, मोरङलाई २–१ ले हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो । बेलबारी–३ मोरङ स्थित स्थानीय खेलमैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा बिन्दावासिनीका लागि २९औं मिनटमा मिलन राईले गोलको खाता खोलेका थिए । त्यस्तै ५०औं मिनटमा भुवन बस्नेतले त्यो अग्रता दोब्बर पारेका थिए । जुन अग्रता खेलको निर्णायक पनि बन्यो ।
उता पराजित डाँगीहाटका लागि ६५औं मिनटमा सुशन तामाङले एक गोल फर्काए तापनि टोलीलाई हारबाट जोगाउन सकेनन् । उद्घाटन खेलको म्यान अफ द म्याच बिन्दावासिनी कै पदम भट्टराई घोषित भए । उनले पुरस्कार वापत नगद २५५५ रुपैयाँ हात पारे ।
प्रतियोगिता अन्तरगत पुष १७ गते शुक्रबारको खेल धरान सिटी एकेडेमी एफसी, धरान र उर्लाबारी फुटबल क्लब, उर्लाबारीबीच हुने आयोजकले जनाएको छ । बेलबारी फुटबल क्लब, मोरङको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ५५,५५५ रुपैयाँ हात पार्नेछ भने उपविजेताले ३३,३३३ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
प्रदेश नम्बर १ का कुल दश टोलीहरुको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको फाइनल खेल आउँदो पुष २५ गते शनिबारका दिन हुनेछ । स्मरणीय छ, बिहीबारको प्रतियोगिताको उद्घाटन एक कार्यक्रमका बीच बेलबारी नगरपालिका, मोरङका मेयर ज्ञानेन्द्र सुबेदीले गरेका थिए ।
← असन्तुष्ट सिख्राकारको एन्फालाई राजिनामा पत्र नेपालगंजमा पनि एन्फाको विधान संशोधनबारे छलफल →
बिबिएफसी फाइनलमा, उपाधिका लागि माङ्सेबुङसँग भिड्ने पुष १६, २०७७
एन्फा र रेफ्रीबीच सहमति, रेफ्रीहरुको राजिनामा पनि फिर्ता पुष १६, २०७७
वार्ड नम्बर २० र १६ अन्तिम चारमा प्रवेश पुष १६, २०७७
रेफ्री विवादः लिग नखेलाउने भन्दै रेफ्रीहरुको सामूहिक राजिनामा पुष १६, २०७७
रुपन्देहीमा फुटसलको ‘प्लेटफर्म’ बन्दै युनिक पुष १६, २०७७
मंसिर २१ देखि प्रथम सतिसाले वैटर कप पुष १६, २०७७